Shandong lijun internatioanal Trading Co., Ltd. dia mpanamboatra plywood lehibe sy mpamatsy, manana fitaovana famokarana mandroso izahay, mitantana tsara ary mpiasa ara-teknika.
Amin'ny maha-mpitarika azy amin'ny famolavolana, famokarana ary fivarotana vokatra rafitra formwork any Shina, ny vokatray dia ahitana ny Plywood Film Faced, plywood melamine, plywood boaty ary ny hafa.
Ny orinasa dia manana toerana fitaterana tena mety, akaikin'ny seranan-tsambo rizhao sy seranan-tsambo lianyungang eo amin'ny 150KM, seranan-tsambo qingdao eo amin'ny 300km, miorina eo akaikin'ny seranam-piaramanidina Linyi manodidina ny 25KM.
Ny orinasa dia manana an-trano nandroso famokarana tsipika 30 napetraka, ny mpiasa eo ho eo amin'ny 200 olona, ​​ny famokarana atrikasa mitana 30.000 metatra toradroa.
Manana orinasa vokatra telo izahay
Ao amin'ny Zhaibuzhuang Viliage tanyi township feixian county linyi tanàna, naorina tamin'ny 2002, indrindra mamokatra ny sarimihetsika miatrika plywood ho an'ny fanorenana formwork sy melamine plywood ho an'ny fanaka sy ny decoration.the acteur dia afaka mamokatra sarimihetsika miatrika plywood 3000 taratasy isan'andro sy melamine plywood isan'andro 1000 sheets .
Ao amin'ny tanànan'i zhoujingpu viliage yitang, lanshan distrikan'i Linyi tanàna, naorina tamin'ny 2015, indrindra mamokatra melamine plywood 3000 isan'andro ary esory ny sarimihetsika fototra niatrika plywood 1000 takelaka isan'andro.
Ao amin'ny Tanjiatun viliage tanyi tanàna feixian firenena Linyi tanàna, naorina tamin'ny 2020, indrindra mamokatra fitoeran-javatra board plywood 5000 taratasy isan'andro.
Ny vokatray dia naondrana tany amin'ny tsenan'izao tontolo izao, toa an'i Middleeast, Japana, Korea, India, Singapore, Tailandy, Azia Atsimo Atsinanana Emira Arabo Mitambatra, Arabia Saodita sns. Mahazo fitokisana sy fankasitrahana avy amin'ny mpanjifa izahay.
Ny kalitao aloha, ny haja no ambony indrindra.Ny valin-teninao afa-po no hery entintsika,
Ny orinasanay dia mifikitra hatrany amin'ny "kalitao voalohany, mpanjifa voalohany, miompana amin'ny olona, ​​mpisava lalana ary manavao" filozofia ara-barotra.
Ny tale jeneraly Mr zhang sy ny mpiasa rehetra dia mandray anao amim-pahatsorana hifampiraharaha amin'ny raharaham-barotra sy ny fiaraha-miasa amin'ny plywood lijun.
Ny orinasa dia manana an-trano nandroso famokarana tsipika 30 sets
Ny mpiasa manodidina ny 200
Ny atrikasa famokarana dia manana 30.000 metatra toradroa